(Sawiro) Rasalwasaare Xasan Kheyre oo isbitaalka ku booqday Askartii ku dhaawacantay Dagaalka Awdheegle. – Xeernews24
(Sawiro) Rasalwasaare Xasan Kheyre oo isbitaalka ku booqday Askartii ku dhaawacantay Dagaalka Awdheegle.
15. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Xasan Cali Khayre ayaa isbitaalka ku booqday askarta ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee shalay ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ciidanku ay ku leeyihiin degamada Aw-dheegle ee gobalka Shabeellada Hoose.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa maamulka Isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee Ciidankii ku soo dhaawacmay weerarkaas, iyaga oo ku jira difaacyada ay ku leeyihiin degmada Awdheegle ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose.
Xasan Cali Khayre oo Ciidanka dhaawcyada qaba u rajeeyay in ay si dhaqsa ah u boqsoodaan ayaa askartii ku dhintay difaacidda qaranimadda Soomaaliyeed Allaha uga rajeeyay in uu Shahiidnimadooda ka aqbalo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa guud ahaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga uga mahadceliyay dadaallada isdaba joogga ah ee ay ugu jiraan soo afjaridda & dagaalka ay kula jiraan Ururka Al-Shabaab.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/3-47.jpg 683 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-15 11:40:262019-08-15 11:40:26(Sawiro) Rasalwasaare Xasan Kheyre oo isbitaalka ku booqday Askartii ku dhaawacantay Dagaalka Awdheegle.
Mustafe Cagjar oo golahaWasiiradiisa ku sameeyey Shaandheeyn fudud. Beesha Caalamka oo Qodobo Xasaasi ah hor dhigtay iyo Axmed Madoobe oo xaaladu...